स्वास्थ्य/ जिबनशैली – Hot Post News
जाडो मौसम शुरु भइसकेको छ । जाडोयाममा धेरै चिसो हुने भएकाले नवजात शिशु र सुत्केरी आमा दुवैका लागि जोखिम हुनसक्छ । नवजात शिशुको केयर गरिएन भने उनसमा छिटो संक्रमण हुनसक्छ । नवजात शिशुलाई जति नै कपडा लगाइदिएपनि चिसो हुन्छ । मौसम परिवर्तनको असर उनीहरुलाई धेरै हुन्छ जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले नवजात शिशु पनि धेरै कमजोर हुन्छन् । चिसो मौसममा बच्चाहरुलाई रुघाखोकी र घाँटीमा संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ । जाडो मौसममा चिसोबाट बच्न न्यायो कपडा लगाएर तातो बनाएर राख्नुपर्छ । चिसो बढी भएमा बच्चा बिरामी पनि पर्न सक्छ । बच्चाको सास फेर्ने नली साँघुरिन्छ यस्तोमा खकार जमेर सास लिनमा कठिनाई हुन सक्छ । नवजात शिशुलाई चिसोबाट कसरी जोगाउन यस्तो गर्नुस् –धुलो, धुँवादेखि नवजात शिशुलाई टाढा राख्नुपर्छ । धुलो, धुँवाले नवजात शिशुलाई दमको समस्या हुने, झाडापखला लाग्ने हुनसक्छ । त्यसैले घर व
तपाई पूजापाठका लागि वा कार्यालय खोल्नासाथ धुप(अगबत्ती) बाल्नु हुन्छ होला ? तपाईले धर्मका लागि वा ग्राहक आउन् भन्ने अपेक्षासहित पसल वा कार्यालयमा बालेको धुपले स्वास्थयमा निकै ठूलो असर पारेको वा पार्ने बारे कहिल्यै हेक्का गर्नु भएको छ । यदी छैन भने यसलाई ध्यान दिने गर्नुहोस् । किनकी धुपले स्वास्थ्यमा चुरोटको सेवन भन्दा ठूलो असर गर्न जान्छ । पूजाआजा तथा कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रममा अगरबत्ती प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोग पूजापीठमा धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ। कतिपयले पूजापाठका अतिरिक्त आफ्नो अफिस, पसल तथा घरमा बिहान बेलुका नियमित रूपमा अगरबत्ती बाल्छन्। धेरैलाई अगरबत्तीको धूवाँ चुरोटको धूवाँभन्दा खतरनाक हुन्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ। अगरबत्तीको धूवाँ चुरोटको धूवाँभन्दा खतरनाक हुन्छ। यसबाट निस्कने धूवाँले ब्रेन ट्युमर तथा क्यान्सर हुने खतरा बढाउने तथ्य पत्ता लागेको छ। अगरबत्तीमा प्रयोग गरि
जाडोमा बढी फुट्छन् हात, खुट्टा र ओठ : यसरी गर्न सकिन्छ घरेलु उपायबाट नै समाधान
काठमाडौं । जाडोयाम सुरु भएको छ । यस बेला सबै उमेर समूहका मानिको हातखुट्टा फुट्ने तथा सुख्खा हुने गर्छ । हात खुट्टाको सौन्दर्यता नै हराउने गरी फुट्ने गर्छ । यसबाट बच्न केही उपायहरु छन् । छालामा सुक्खापन हटाउन र फुटेको छाला चाँडै ठीक पार्न नियमित मोस्चराइजर गर्नुपर्छ । हातमा रासायनिक औषधिको सट्टा प्राकृतिक वस्तु प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ । ग्लिसिरिन र गुलाबजलको मिश्रणलाई बोतलमा भरेर फ्रिजमा राख्ने र कुनै काम गर्नुअघि यो मिश्रणलाई हातमा मसाज गर्दा फाइदा पुग्छ । दूध र सुन्तलाको रससँग मह मिसाएर सुक्खा वा फुटेको छालामा लगाउन मोस्चराइचर बनाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले छालामा भएको पानी सोस्ने ब्याक्टेरिया हटाएर त्यहाँको सुक्खापन कम गर्दछ ।विशेषगरी जाडोयाममा पानीको कमीका कारण सुक्खापन आउने भएकाले दैनिक रूपमा सात–आठ गिलास पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । हरेक बिहान तातोपानीमा दुई चम्चा मह र कागती मिसाएर खाँ
तराईदेखि हिमालसम्मै पाइने बोझोमा धेरै औषधीय गुणहरु पाइन्छन् । आयुर्वेदमा बोझोको विशेष महत्व रहेको पाइन्छ ।बोझो समुद्रीसतह देखि लगभग २००० मीटर उचाईसम्म पाइन्छ । बोझोको बोट दलदल परेको तथा सीमसार क्षेत्रमा पाइन्छ । खास गरी हिमाली क्षेत्रमा नदी तथा खोला किनारामा पाइन्छ । यो विरुवा जमीनमुनि रहेको काण्डबाट पलाएर आउँछ। काण्ड जमीनमुनि समकोण भएर २० से.मी. देखि १ मी. सम्म फैलिएको हुन्छ । यसको स्वाद परपराउने पीरो र केही तीतो–तीतो हुने भएपनि वास्ना भने सुगन्धित हुन्छ । अङ्ग्रेजीमा स्वीट फ्ल्याग भनिने बोझोको वैज्ञानिक नाम अकोरस कालामस हो । यसको पात ५ देखि ४० से‍.मी.लामो र १ देखि ३ से. मी. चौडा हुन्छ । टुप्पो तीखो भएको हुन्छ भने काण्ड जमिनमुनी रहन्छ । यो काण्डलाई सजिलैसँग टुक्रा गर्न सकिन्छ। यसको भित्री भाग सेतो वा अलि गुलाफी रंगको हुन्छ । काण्डको माथिल्लो सतहमा मसिनो झुस हुन्छ र तल्लो सतहम
स्तनपानमा नयाँ आमाले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
शिशुले जन्मेको छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गर्न पाउनु उसको अधिकार हो । आफ्नो सन्तानलाई स्तनपान गराउन पाउने अधिकार प्रत्येक आमालाई छ । परिवार र राज्यले आमा र शिशुको हक सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । नवजात शिशु जन्मिएको एक घण्टाभित्र नै आमाको पहिलो पहेँलो (बिगौती) दूध खुवाउनुपर्दछ । पहेँलो दूधले खोप सरह शिशुलाई रोगबाट बचाउँछ । साथै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ । शिशुको आवश्यकता अनुसार एक दिनमा ८ देखि १२ पटक (२४ घण्टा दिन र रात) स्तनपान गराउनु पर्दछ । आमाको दूधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्वहरू र शिशुलाई पुग्ने पानीको मात्रा हुने भएकोले पानी पनि खुवाउनुपर्दैन । बच्चा कम्तिमा दुई वर्ष नपुगुन्जेल नियमित रुपले अन्य खानाको साथै आमाको दूध नै खुवाइ रहनुपर्छ । सुत्केरी आमाले हरेक दिन विभिन्न प्रकारका खाना (अन्न, गेडागुडी, हरिया सागपात, तरकारी तथा फलफूल, पशुपंक्षीजन्य खानेकुरा) खानुपर्छ । सुत्केरीले गाह्रो
दलहन वनस्पतिमा पर्ने बदाम जाडो मौसममा अधिकांशले खान रुचाउने गर्दछन् । जाडोयाममा घाममा बसेर बदाम खानु निकै आनन्दमयी हुन्छ । बदाम खानु स्वादका हिसाबले त मीठो हुन्छ नै साथै मानव स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ । जाडो मौसममा खाइने बदामका फाइदाहरु निम्नानुसार छन् : १. तौल घटाउन - बदाम खाँदा थोरै मात्राले पनि पेट भरिएको महशुस हुने भएकाले अन्य क्यालोरियुक्त चिल्लो पर्दाथ भएको खानेकुरा खाने इच्छा हुँदैन । त्यसैले मोटो मानिसलाई यसले लाभ पुर्याउने गर्दछ । बदाम खाँदा तौल घट्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । २. क्यान्सरबाट जोगाउन - बदामको सेवनले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको खतराबाट समेत जोगाउँछ । बदाममा हुने फाईटोस्टेरोल नामक तत्वले ट्युमर समेत नियन्त्रण गर्दछ । ३. कोलेस्टोरलमा नियन्त्रण - बदाममा हुने अंसतृप्त फ्याटी एसिडले शरीरमा सन्तुलित कोलेस्टरल तह कायम गर्न सहयोग गर्छ । यसका साथै बदामको
बस, माइक्रो, ट्याक्सी आदिमा टाढाको यात्रा गर्दा धेरैलाई वान्ता अर्थात उल्टी हुने समस्या हुन्छ । वान्ता हुने समस्याका कारण कतिपय मानिसहरु यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पहिलादेखि नै असहज महशुस गर्छन् । वान्ता हुने समस्याका कारण कतिपय साना बालबालिका त बस वा माइक्रो देख्ने बित्तिकै डराएर रुनसमेत थाल्छन् । सवारी साधानमा यात्रा गर्दा किन हुन्छ वान्ता ? यदी तपाईलाई पनि सवारी साधानमा यात्रा गर्दा वान्ता भएको छ भने तपाईलाई राम्रोसँग थाहा छ वान्ता हुँदा शरीर र मन कति धेरै कमजोर हुन्छ भनेर । त्यसैले आज हामी वान्ता किन हुन्छ र वान्ता हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिदैछौं । सवारीमा यात्रा गर्दा वान्ता किन हुन्छ ? टाढाको यात्रा गर्दा वा धेरै घुम्तिको बाटोमा यात्रा गर्दा मानिसलाई वान्ता हुन्छ । तीव्र गतिमा रहेको सवारीभित्र मानिसले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन नपाउँदा वान्ता हुनसक्छ । कसरी बच्ने ? –
गर्भनिरोधक चक्की के हो ? कति पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
किशोर अवस्था लागेसँगै शारीरिक रुपमा आउने परिवर्तनले केहि किशोरकिशोरीले आफूलाई शारीरिक सम्पर्कका लागि परिपक्क भएको महशुस गर्दछन् । तर किशोर अवस्था शारीरिक सम्पर्कका लागि परिपक्क उमेर भने होइन । शारीरिक सम्पर्क गर्ने कुनै पनि ब्यक्ति युवा उमेरमा प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । तर आज हामी शारीरिक सम्पर्कका बारेमा भन्दा पनि शारीरिक सम्पर्क भए पश्चात रहन सक्ने गर्भ निरोधका बिषयमा चर्चा गर्नेछौँ । यौन सम्बन्ध हुनासाथ अधिकाशंले आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्ने गर्दछन् । तर के यसरी गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्नु उचित हुन्छ त ? वा, कति पटकसम्म सेवन गर्दा यसले हानी गर्दैन ? गर्भनिरोधक चक्कीमा हर्मोनको मात्रा सामान्यभन्दा बढी हुन्छ । हर्मोन बढी भएकै कारणले यो गर्भ निरोधका लागि प्रभावकारी मानिन्छ । तर गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग आकस्मिक वा कहिलेकाही मात्र प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ । गर्भनिरोधक चक्क
पीपललाई पवित्र वृक्षका रुपमा मानिन्छ । सनातन हिन्दू धर्मवालम्वीले पीपललाई भगवान् विष्णुको स्वरूप मानेर पूजा गर्छन् । धार्मिक तथा वैदिक कार्यका लागि पीपलको प्रयोग अनिवार्य जस्तै हुन्छ । धार्मिक क्षेत्रमा मात्र नभएर पीपलको पातमा औषधीय गुणहरु पनि धेरै हुन्छन् । जसबारे सवैलाई जानकारी नहुन सक्छ । त्यसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । अक्सिजन धेरै फ्याक्ने रुख भएकोले हाम्रो समाजमा यसको महत्त्व धेरै छ। यति मात्र होइन आयुर्वेदमा पनि यसमो प्रयोग हुन्छ। विभिन्न रोगको औषधिका लागि पीपलको पात, डाँठ र फलको प्रयोग हुन्छ । लगातार खोकिरहने दमको रोगीका लागि पीपलको पातसँगै जोडिएको कमलो डाँठको बोक्रा निकालेर भित्रको भाग घाममा सुकाउनुहोस् । त्यसको चूर्ण बनाएर दम रोग भएक बिरामीलाई मनतातो पानीसँग पिउन दिनुहोस् । तीन महिनासम्म नियमित रूपमा यसो गरे दम रोग पूर्णरूपमा निको हुन्छ। सर्दी, रुघाखोकीबाट छुटकारा पाउन पी
पाकिस्तानका बालबालिका र किशोरीका लागि बेलायतले तयार पारेको टाइफाइड रोग विरुद्धको भ्याक्सिनको परिक्षण नेपालमा गरिएको खुलेको छ । पाकिस्तानका ९० लाख बालबालिका र किशोरीका लागि तयार पारिएको भ्याक्सिन नेपालमा २० हजारमा परिक्षण गरिएको हो । बेलायतले पाकिस्तानका ९० लाख बालबालिका र किशोर किशोरीका लागि भन्दै भ्याक्सिन तयार पारेको थियो । त्यो भ्याक्सिनको सफल परिक्षण गरिएको छ । तर परिक्षणका विषयमा भने नेपालका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई जानकारी दिइएको थिएन । नेपालका २० हजार नागरिकको ज्यान जोखिममा राखेर पाकिस्तानका नागरिकका लागि भ्याक्सिन परिक्षण गरिएको तथ्य खुलेपछि अहिले नेपालमा त्यसको चर्चा भएको छ । यस्तो परिक्षणमा नेपालको कानुनी स्वीकृतिको त कुरै छाडौं सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि जोखिमबारे केही जानकारी गराइएको थिएन । यो परिक्षणमा अमेरिकी गैर सरकारी संस्थ बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनको आर्थिक स